Dalkeenna Soomaaliya: Hodan ay dadkiisu hurdaan! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dalkeenna Soomaaliya: Hodan ay dadkiisu hurdaan!
Dalkeenna Soomaaliya: Hodan ay dadkiisu hurdaan!
Muqdisho – Soomaaliya waa dal dhaca Geeska Afrika kaasi oo xudduud ahaan la wadaaga dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kiinya iyo Badweynta Hindiya. Soomaaliya waa dalka 2aad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika, dhulka ayaa u qeybsama deegaanno sare, dhuldaaqsimeed iyo buuroley, Cimilo ahaan waddankeennu waa mid diiran sannadki oo idil, inkastoo ay soo dhacaan dabeylaha monsoonku iyo roob aan joogto ahayn.
Previous: GOS oo qabatay Wajigii shanaad ee Tababarka maamulka iyo maaraynta Isboortig + Sawirro
Next: Waa kuma shaqsiga ku booriyey in Roberto Firmino uu ku ciyaaro hal Il?